★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလားတွေက ညီညီညွတ်ညွတ် အကောက်ကြံနေတယ်။ မြန်မာတွေကဘာလုပ်မှာလဲ?
ကုလားတွေက ညီညီညွတ်ညွတ် အကောက်ကြံနေတယ်။ မြန်မာတွေကဘာလုပ်မှာလဲ?
မွတ်ဆလင်လူရမ်းကားဝါဒဆိုတာ အရမ်းကို ယုတ်ညံ့ပါတယ်။ လူသားအကျိုးပြုလုပ်ရပ်တွေမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို ရှာလို့မတွေ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတိုင်းမှာတော့ မွတ်ဆလင်တွေ ပါတ်သက်နေပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေမှာ ကုလားတွေက အရမ်းလူညီပြီး တက်ကြွပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲ ၀င်ခွင့်ရအောင် ကုလားတွေက တက်တက်ကြွကြွ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒေါသထွက်မလား? ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ အဲဒါက အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘာမှ မလုပ်ပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာလား? အဲလိုတော့ တာဝန်မမဲ့ပါနဲ့။ လူသားတိုင်းဟာ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ မွတ်ဆလင်လူရမ်းကားဝါဒကို ရွံရှာတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ၂ ယောက်လောက်ကို စည်းရုံးပြီး မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး အသင်းဖွဲ့ လေးတွေဖွဲ့ပါ။ ဘလော့ထောင်ပါ။ ဆောင်းပါးရေးပါ။ ကဗျာတွေနဲ့ သယော်ပါ။ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင် ၀ါဒအကြောင်းကို လူထု သိရှိအောင် ကြံစစေချင်ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်တဲ့ တခြားနည်းလမ်းတွေလဲ ကြံဆောင် လုပ်ဆောင်ကြပါဗျာ။ ဘေးထိုင် ဘုပြောတဲ့ အလုပ်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ ဆရာကြီးတွေလိုလဲ ဟန်ကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ လက်ပိုက် ကြည့်မနေပါနဲ့။ တာဝန်ယူတတ်ပါစေကုလားတွေ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လိမ်ညာ အကောက်ကြံနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်လိုက်ပါဦး ။ မြန်မာ့ခွပ်ဒေါင်းအလံနဲ့ ခေါင်းစီးကတော့ ကုလားတွေရဲ့ အသုံးချခံပစ္စည်းလေး တစ်ခုပါပဲ။ ဂျပန်ထိုင်းအမေရိကန်အမေရိကန်မလေးရှား(ယုံကြည်ချက် ။ ။ မုဒိမ်းကောင် လူရမ်းကား ၀ါဒကို ဒေါသမထွက်ပါနဲ့… နှိပ်ကွပ်ရလို့လဲ ပီတိမဖြစ်ပါနဲ့. . . ကုလားကိုလဲ လူမျိုးရေး မနှိပ်ကွပ်ပါနဲ့ . . အဲဒါတွေက အကျိုးမရှိပါဘူး။ ယုတ်ညံ့သည့် ၀ါဒဆိုးကြီးကို ဖြိုဖျက်ရေးမှာ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ရေးက လက်တွေ့အကျဆုံးဖြစ်ပါသည် )
ဒေါက်တာလွန်းဆွေခင်ဗျားဆ၇ာ၇ဲ.ဘလော.ပါ၇ခိုင်လူငယ်တဦးပေးစာနှင်.ဆ၇ာဧ။်ဖြေ၇ှင်းချက်ကိုဖတ်၇ှ၇သောကြောင်.ဒီစာကိုေ၇း၇ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆ၇ာ၇ဲ.ဘလော.ကိုသူငယ်ချင်းတဦးအသိပေးခြင်းဖြင်.စက်တင်ဘာတော်လှန်ေ၇းကတည်းကဖတ်၇ှလာခဲ.တာယခုထက်ထိပါဘဲ။ဒါပေမဲ.ယခင်နဲ.ယခုဖတ်၇ှ၇ခြင်းသဘောတ၇ားခြင်းမတူတော.ပါ။မတူ၇ခြင်း၇ှင်းလင်းပြပါမယ်။ယခင်ကတော.ဒီမိုကေ၇စီဘက်တော်သားတယောက်၇ဲ.သတင်းဘလော.အနေဖြင်.ဖတ်၇ှခြင်းပါ။နီးစပ်၇ာသူငယ်ချင်းများကိုလည်းဘလော.၇ဲ.အကြောင်းကိုအသိပေးခဲ.ပါတယ်။ဒါပေမဲ.များမကြာခင်ကဘလော.၇ဲ.ဆောင်ပါးများနှင်.သတင်း၊စီဘောက်များမှာဒီမိုကေ၇စီဘက်တော်သားအခြင်းထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုများနေ၇ာယူလာကြတာကိုစိတ်မကောင်းစ၇ာတွေ.၇ှိလာ၇ပါတယ်။စီဘောက်မှာနေ.စဉ်လိုဘ၊ဲယနေ.အထိတွေ.၇ှိနိုင်ပါတယ်။နောက်များမကြာမှီလှေစီးဘင်္ဂလီအေ၇းအခင်းပေါ်ပေါက်လာသောအခါခင်ဗျား၇ဲ.ဘလော.မှာဒီအကြောင်းတွေဆောင်းပါသတင်းအနေဖြင်.ဝေေ၀ဆာဆာပေါ်လာတာယနေ.အထိပါဘဲ။ဒါပေမဲ.ခင်ဗျားပြောသလို၊ဒီဆောင်းပါးတွေသူများပို.တာ၊ဒီသတင်းတွေခင်ဗျားသူများဆီကလင်.လုပ်တာ၊ခင်ဗျားက messenger ဘဲ၊ခင်ဗျားနဲ.မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ.၀ိနည်းလွှတ်ကိုသုံးမယ်ဆိုယင်အဲဒီအချိန်ကခင်ဗျားစီဘောက်မှာဒီအကြောင်းတွေ၇ှင်းလင်းချက်တွေ (ခင်ဗျားမှုနဲ.မကိုက်ညီ၊ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားမတွေ.လိုမလင်.မိခဲ.လို.ဘဲတွေးပါ၇စေ)ကျနော်အပါအ၀င်လူအတော်များများလင်.လုပ်ခဲ.ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ.ဒီမိုကေ၇ဘက်တော်သားအခြင်းခြင်းစောင်းမြောင်းေ၇းသားနေကြတဲ.ခင်ဗျားစီဘောက်မှာဒီလင်.တွေနဲ.ဒီအေ၇းအသားတွေဟာအဖျက်ခံခဲ.၇ပြီးဒီလူတွေ၇ဲ. IP address ဟာ ban လုပ်ခံခဲ.၇ပါတယ်။ဒီမှာဘဲ၇ခိုင်လူမျိုးများနှင်.အနေဖြင်.နောက်ကျောကိုဒါးနဲ.ထိုးမဲ.လူတယောက်အနေဖြင်.ခင်ဗျားကိုတွေ.၇ှိခဲ.ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစပထမတော.ကျနော်တို.တိတ်တဆိတ်နေဖို.ကြိုးစားခဲ.ပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော.ဒီသတင်းတွေကိုေ၇းနေသူတွေဟာဒီမိုကေ၇စီဘက်တော်သားတွေလို.ယုံကြည်တာတကြောင်း၊အများစုက၇ခိုင်ပြည်နယ်မေ၇ာက်ဘူး၊၇ိုဟင်ဂျာဆိုတာဂျိုပါသလားမသိဘဲေ၇ှာက်ေ၇းနေသူတွေဖြစ်တာကြောင်.ပါ။ဒါပေမဲ.ဒီအေ၇းဟာအချိန်တိုတိုအတွင်း United Nation ကိုေ၇ာက်၇ှိသွားတော.ဒီမိုကေ၇စီခုတုံးလုပ်နေတဲ.ဒီမိုကုလားတွေကိုလျှော.တွက်မ၇တော.သလိုခင်ဗျားတို.၇ဲ.တဖက်စောင်းနင်းေ၇းသားမှုတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကိုမသိ၇ှိလက်လှန်းမမှီတဲ.၊ခင်ဗျားတို.၇ဲ.ဘလော.နဲ.သတင်းတွေကို၇ိုးသားစွာယုံကြည်ဖတ်၇ှတဲ.သူတွေကိုအမှန်တ၇ားကိုလက်ဆင်.ကမ်း၇ှင်းပြ၇မဲ.တာဝန်၇ှိလာတာကြောင်.ကျနော်တို.အနေနဲ.တိတ်ဆိတ်မနေနိုင်တော.ပါ။ခုချိန်မှာတော.ခင်ဗျားတို.သတင်းတွေကိုဖတ်၇ှ၇ခြင်းသဘောကတော.၇န်သူ(ခင်ဗျားအပါအ၀င်၊ဧ၇ာဝတီ၊မိုးမခ၊မိုးသီးဇွန်၊နဲ.တချို.သောသတင်းဌါန)၇ဲ.ခြေလှန်းကိုသိ၇ှိဖို.ဘဲဖြစ်တယ်။တသက်လုံမှားလာခဲ.တဲ.နအဖဟာဒီနေ၇ာမှာတော.ဒီနေ.၊ဒီအချိန်ထိမှန်နေခဲ.တယ်၊မမှန်တာကတော.ခင်ဗျားတို.တတွေဘဲ။စစ်အာဏာ၇ှင်စနစ်ကလွှတ်မြှောက်သည်ဖြစ်စေ၊မလွှတ်မြှောက်သည်ဖြစ်စေအမှန်တ၇ားကိုဘဲခင်ဗျားတို.ဖတ်၇ှသူတွေကိုလက်ဆင်.ကမ်းသင်.တယ်။၇ခိုင်တွေက၇ိုဟင်ဂျာတိုင်း၇င်းသားဆိုတာ၇ခိုင်ပြည်ေ၇ာ၊မြန်မာပြည်မှာပါမ၇ှိဘူးလို.ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်၊နိုင်ငံသားဖြစ်လက်ခံ၊မခံဆိုတာသူတို.သက်သေုပြနိုင်တဲ.အပိုင်းနဲ.ဘဲဆိုင်တယ်(ထိုင်းမှာနှစ်ဆက်၊သုံးဆက်မွှေးတဲ.မြန်မာတိုင်း၇င်းသားခလေးတွေထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်ခင်ဗျားလိုထိုင်းမှာနေတဲ.သူသိမှာပါ၊အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတောင်ကုဒ်တွေနဲ.သီးသန်.ခွဲထားသေးတယ်)။ဘလော.ပိုင်၇ှင်ပေမဲ.ဒီအကြောင်းတွေခင်ဗျားေ၇းတာမဟုတ်လို.တာဝန်မယူဘူးဆိုယင်၊တခုလောက်မေးပါ၇စေ။ဒီအကြောင်းတွေခင်ဗျားဘယ်လောက်ထိနှိုက်နှိုက်ချွှတ်ချွှတ်သိပါသလဲ။မသိ၇င်တော.ခင်ဗျားကိုဒီနေ၇ာကနေဗဟုသုတလေးနဲနဲပေးပါ၇စေ။၇ခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ထပ်ဖို.ဘယ်သူမှပါမစ်ယူ၇န်မလိုအပ်ပါ။၇ခိုင်လူဦးေ၇ဧ။် ၇ာနှုန်း၁၀၀ နီးနီးတ၇ား၇ုံးသွားလက်မထပ်ပါ။၇ခိုင်ပြည်နယ်မှာ၇ှိတဲ.မှုဆလင်တွေလွှတ်လပ်စွာလက်ထပ်ခွင်.မ၇ဆိုတာတော.ခင်ဗျား၇ဲ.ဒေါက်တာဦးနှောက်နဲ.ဘဲစဉ်းစားကြည်.ပါ။၇ခိုင်ပြည်နယ်မှာမှတ်ပုံတင်မ၇ှိတဲ.လူများစုကတော.၇ခိုင်တွေပါဘဲ၊ယခင်၇ှိပြီးမှတ်ပုံတင်များကိုအသစ်ပြန်လှဲလယ်လိုက်တဲ.အချိန်မှာတော.အကုန်လုံနီးနီးမှတ်ပုံတင်မ၇ှိဖြစ်သွားတယ်(ကျေးလက်၊တော၇ွှာနေသူများကို၇ည်ညွှန်းတာပါ)။အများစုကတော.မိသားစုလိုက်ဓါတ်ပုံ၇ိုက်၇န်အပိုငွေကြေးမ၇ှိလို.ဖြစ်ပါတယ်။တချို.၇ိုက်နိုင်သူများကိုတော.လူဝင်မှုကြီးကြပ်ေ၇းကပို.ပေးမယ်ဆိုပြီး၊မပို.ဘဲလာယူခိုင်းပါတယ်။လာယူတဲ.အချိန်မှာပိုက်ဆံတောင်းတော.မတတ်နိုင်တော.ဗလာပြန်သွားသူတွေဒုနဲ.ဒေးနဲ.ပါ။အဲဒီအချိန်တုန်းကဓါတ်ပုံ၇ိုက်အဖွဲ.နဲ.ကျနော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ဘူးလို.သိ၇ှိ၇ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီကျေးလက်နေသူတွေမြို.ကိုတက်လာယင်၇ဲတွေမှတ်ပုံတင်စစ်ပြီးတောင်းစားတာခဏခဏတွေ.နေ၇တဲ.အဖြစ်၇ိုးနေပါပြီ။မြို.ကြီးပြကြီးကိုဆေးကုဖို.နေသာသာနယ်မြို.ကလေးကတတ်နိုင်တဲ.တိုင်း၇င်းဆေးလေးကိုခက်ခက်ခဲခဲလာဝယ်နေ၇တဲ.အဖြစ်ပါ။၇ခိုင်ပြည်နယ်မှာ၇ှိတဲ.မှုဆလင်လူဦးေ၇အကုန်လုံနီးနီးမှတ်ပုံတင်၇ှိပါတယ်။ဒီလူတွေအကုန်လုံး၇ခိုင်ပြည်နယ်မြို.တွေအကုန်လုံးမှာပြန်နှံသွားလာနေထိုင်တာ၇ခိုင်ပြည်ေ၇ာက်ဖူးသူတိုင်းတွေ.နိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အတွင်းပိုင်းမှာဆိုယင်၇ခိုင်ပြည်ကနေယိုးဒယားနယ်စပ်ထိတွေ.နိုင်ပါတယ်။၇န်ကုန်မြို.မှာ၇ခိုင်မှုဆလင်ဆိုပြီးကိုယ်.ဘာသာကိုယ်အမည်နာမတပ်ခေါ်နေတာလည်းသူတို.ဘဲဖြစ်ပါတယ်။(၇ခိုင်ပြည်မှာချင်းလူမျိုးတော်တော်များနေထိုင်ပါတယ်။သူတို.ဘယ်တော.မှ၇ခိုင်ခ၇စ်ယန်ဟူ၍သုံးစွဲတာမတွေ.၇ှိ၇ပါ၊)စစ်တွေမြို.ကလေယာဉ်စီးခ၇ီးသည် ၉၀ ၇ာနှုန်းဟာ၇ခိုင်ပြည်ကမှုဆလင်တွေဘဲဆိုတာခင်ဗျားတို.အဆက်အသွယ်၇ှိလို.စုံးစမ်း၇င်သိနိုင်ပါတယ်။ဒီတော.၇ခိုင်ပြည်မှာ၇ှိတဲ.မှုဆလင်လူမျိုးတွေလွှတ်လွှတ်လပ်လပ်ခ၇ီးသွားခွင်.မ၇ဘူး၊နေမကောင်းယင်ဆေးကုခွင်.တောင်မ၇ဘူးဆိုတဲ.အသံတွေကိုမှန်မမှန်ခင်ဗျားတို.ချင်.ချိန်ခဲ.ကြလော၊ဒါမှမဟုတ်နအဖဆန်.ကျင်သတင်းဆိုပြီးေ၇ာလော။ နောက်တခုပြောချင်တာကတော.လူမျိုးေ၇းအဓိက၇ုန်းဖြစ်ယင်ခင်ဗျားတို.အကုန်လုံး၇ဲ.စိတ်ထဲမှာ၇ခိုင်တွေကိုလူဆိုးစ၇င်းသွင်းလိုက်ကြတာဘဲ။ကျနော်.ဘ၀မှာ ၃ ကြိမ်ကြုံဘူးတယ်။ဘယ်မှုဆလင်ကုလားမှသေတာမကြုံဘူး၊အဲ ၇ခိုင်တွေကတော.မသေတဲ.အကြိမ်မ၇ှိဘူး၊ခင်ဗျားတို.ကထင်မယ်၇ခိုင်တွေကလူများစုမို.မှုဆလင်တွေအသေအပျောက်များလိမ်.မယ်လို.၊ဘာလို.မသေတာလဲဆိုယင်ကျူပ်တို.ကဗုဒ္ဓဘာသာ၊သူတပါးအသက်ကိုသတ်ဖို.ဘာသာတ၇ားကလည်းမသင်ဘူး၊အဖေ၊အမေ၊အဖိုး၊အဖွားတွေကလည်းအားမပေးဘူး၊မှုဆလင်တွေ၇ဲ.ထုံးစံအတိုင်းအဓိက၇ုန်းဖြစ်လို.အပြင်ထွက်အစားအသောက်မ၀ယ်၇ဲယင် ခလေးနဲ.မိန်းမတွေပေးလွှတ်လိုက်တော.ပြီးသွားတာဘဲ၊သူတို.နေတဲ.အိမ်ယာတွေကို၇ခိုင်တွေကမီး၇ှိ.ဖျက်ဆီးတယ်လို.ခင်ဗျားတို.ကတော.တွေးမှာဘဲ။အမှန်တကယ်တော.လမ်းပေါ်မှာတွေ.၇င်၇ိုက်ပုတ်တာလောက်ဘဲ၊ဒါက၇ခိုင်အများစုနေတဲ.တောင်ပိုင်းတွေမှာအကြောင်းကိုပြောပြတာ၊ဒါပေမဲ.မှုဆလင်တွေအများစု၇ှိတဲ.ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော၊ကျောက်တော်ဖက်အခြမ်း(ခင်ဗျားတို.၇ဲ.တိုင်း၇င်းသားဆွေမျိုးစုပါလို.တကြော်ကြော်အော်နေတဲ.၇ိုဟင်ဂျာပါလို.ကင်ပွန်းတပ်နေသူများ) မှာ၇ှိတဲ.၇ခိုင်တွေကတော.ခလေး၊မိန်းမ မလွှတ်ပါဘူး၊မီး၇ှိဖျက်ဆီး၊မုဒိမ်းကျင်.အသတ်ခံ၇တာဘဲ။ဒီအ၇ပ်မှာ၇ှိတဲ.၇ခိုင်တွေကတော.အဓိက၇ုန်းဖြစ်တော.မယ်ဆိုယင်အေ၇းပေါ်အထုပ်ကလေးထုပ်ပြီးပြေးဖို.ပြင်ထား၇တာဘဲ။ဒါကိုခင်ဗျားတို.လို၇ခိုင်ပြည်ဆိုမြေပုံထဲမှာသာမြင်ဘူးပြီးေ၇ှာက်၇န်းေ၇းနေသူတွေသိအောင်ပြောပြတာ။ဒါတွေကိုေ၇း၇ခြင်းကခင်ဗျားကို၇ခိုင်သတင်းတွေ၊ဒီအကြောင်းတွေကိုဖေါ်ပြဖို.အတွက်ေ၇းတာမဟုတ်ဘူး၊ခင်ဗျားတို.အနေနဲ.မျက်မမြင်ပုဏ္လား ၆ ယောက်လိုကိုထင်၇ာကိုယ်တွေးပြီးမေ၇းအောင်၊ငါေ၇းတာမဟုတ်ဘူးသူများဆီကလင်.လုပ်တာငါနဲ.မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးကိုယ်ဘလော.ကိုယ်တာဝန်မယူဘဲကိုယ်လွှတ်၇ုန်းတာမျိုးဖြစ်စေတဲ.တဖက်စောင်းနင်းဖေါ်ပြတာမျိုးမဖြစ်၇အောင်သတိပေး၇ခြင်းဖြစ်တယ်။နအဖဆန်ကျင်ေ၇းဖြစ်ပြီးေ၇ာဆိုပြီးအမျိုးသားေ၇းသစ္စာဖောက်၇င်တော.ကိုယ်သမိုင်းကိုယ်ေ၇းသလိုဖြစ်သွားအုံးမယ်။နောက်တချက်ကခင်ဗျားဆိုသလိုခင်ဗျားအခကြေးငွေမဲ.အပင်ပန်းခံပြီးဘလော.ကြီးကိုေ၇းနေပါတယ်ဆိုလို.လေးစားပါတယ်၊ဒါပေမဲ.ပိုက်ဆံ၇တယ်ဆိုတာတိုက်၇ိုက်၇မှပိုက်ဆံ၇တယ်လို.တော.မတွေးသင်.ဘူးထင်တယ်။ခင်ဗျားဘာကြောင်.လူသိများတယ်၊ဒီအချက်ကိုမူတည်ပြီးဒီအသင်းဝင်ပြီးဒီအလုပ်ကိုကိုခင်ဗျား၇တယ်၊ဒီအသင်းကြီးကိုဘယ်သူတွေကစပွန်ဆာလုပ်ပြီး၊ဒီပိုက်ဆံတွေဘယ်ကလာတယ်ဆိုပြီးသွယ်ဝှိက်၇ယင်လဲပိုက်ဆံ၇တယ်ဆို၇မှာဘဲ။ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ကိုဆေးကုယုံလေးတခုနဲ.လူတွေကလေးစားပြီးကမ္ဘာအ၇ပ်၇ပ်ကဆုပေး၊ Donate လုပ်နေတယ်လို.များခင်ဗျားတွေးနေသလား။ဒီအောက်ကလင်.တွေကတော.ခင်ဗျားသိ၇ှိထားသင်.တယ်ထင်လို.လင်.ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီပထမလင်.ကတော.၇ခိုင်တွေ၇ဲ. another falling city ( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို.၇ဲ.ဗုဒ္ဓတ၇ားပျောက်ကွယ်သွားတော.မဲ.မြေလို.ခံယူကြပါတယ်။)ကျောက်တော်မြို.အဲဒီမှာခင်ဗျားထင်သလိုဒီမှုဆလင်တွေဟာဘာသာေ၇း၊လူမှုေ၇း၊ပညာေ၇းအနှိမ်ခံနေ၇သလားဆိုတာခင်ဗျားတို.ခု၇ှိနေတဲ.အ၇ပ်ကတိုင်း၇င်းသား က၇င်၊မွန်တို.နဲ.နှိုင်းယှဉ်ကြည်.စမ်းပါ။http://www.youtube.com/watch?v=hCxFSqBVk08&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedဒီတခုကတော.ပညာ၇ည်ချွန်ဆုပေးပွဲပါ။ဒီအထဲမှာ၇ခိုင်လူမျိုးတွေမတွေ.၇ှိ၇ပါဘူး။ဒီအ၇ပ်မှာ၇ှိတဲ.၇ခိုင်တွေပညာသင်ကြားေ၇းအခက်အခဲ၇ှိပါတယ်။မှုဆလင်က၇ခိုင်တွေကြားမှာပညာသင်ကြား၇တာလုံခြုံပါတယ်။ဒါပေမဲ.သူတို.ကြားမှာတော.၇ခိုင်တွေသင်ကြား၍မ၇တာသဘောပေါက်ပါ။တတ်နိုင်သူတွေကတော.စစ်တွေနဲ.တခြားမြို.များမှာဆန်ပေး၊စပါးပေးသင်ကြားကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးတွေဆီပို.သင်ကြားကြပါတယ်။ဒီအထဲကမြိုပြအုပ်ချူပ်ေ၇းလုပ်တဲ.လူတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို.စိုး၇ိမ်နေသလို၇ခိုင်တွေမဟုတ်ပါဘူး၊ဒါမှမယုံယင်နောင်တချိန်ဒီမိုကေ၇စီ၇ယင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်အဲဒီနေ၇ာတွေမှာယှဉ်အေ၇ွှးခံကြည်.စမ်းပါ။ဘယ်သူနိုင်မလဲကြည်.၇အောင်။ဒါကြောင်.လည်းဦးနုကအဲဒီနေ၇ာတွေမှာအနိုင်၇ဖို.၇ခိုင်တွေကိုေ၇ာင်းစားခဲ.တာပါဘဲ။http://www.youtube.com/watch?v=9TCFBVdRI2c&NR=1ဒါကတော.ခွပ်ဒေါင်းနဖူးစီးတွေနဲ.၈၈၈၈ ကျောင်းသားတွေလား၊ဒါမှမဟုတ်ခွပ်ဒေါင်းတွေ for sale ဖြစ်သွားပြီလား၊၈၈၈၈ ခုတုံးကစာေ၇းသူဟာစစ်တွေဒီဂ၇ီကောလိပ်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ.၊အဲဒီအချိန်က မဆလ ပါတီ၇ဲ.black list ၀င်နေတဲ.ကျောင်းသားတယောက်ဆိုတာကြုံတုံးပြောပါ၇စေ၊ဒါပေမဲ.၈၈၈၈ ကျောင်းသားလို.မိမိကိုယ်မိမိမသတ်မှတ်သလို၊ခံလည်းမခံယူထိုက်ပါဘူး၊မိမိက ၈၈၈၈ ကျောင်းသားတွေလို.သတ်မှတ်ထားသူတွေကတော.မင်းကိုနိူင်၊ကိုကိုကြီးတို.အဖွဲ.တို.ဘဲဖြစ်ပါတယ်(မှုဆလင်မြအေးမှလွှဲ၍)။ဒေါ်စုနဲ.ဓါတ်ပုံတွဲ၇ိုက်ထားတိုင်း၊ဓါတ်ပုံနောက်ခံမှာပါတိုင်း၊၈၈၈၈ တုံးကလှုပ်၇ှားမှုမှာပါတိုင်း၊ယခုထိအော်ကျယ်အော်ကျယ်လုပ်နေသူတိုင်းမိမိအနေဖြင်.မသတ်မှတ်ပါ။နိုင်ငံေ၇းခုတုံးလုပ်ပြီးအမျိုးသားေ၇းသစ္စာဖေါက်သူများကို ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟုမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။၇ခိုင်ပြည်တွင် ၈၈၈၈တုံးကမည်သည်.မှုဆလင်မှမတွေ.၇ှိ၇ဘဲ၊ေ၇ွှးကောက်ပွဲလုပ်မှပေါ်ထွက်လာပြီးမှုဆလင်အများစုနေ၇ာများတွင်အေ၇ွှးခံအနိုင်၇၇ှိပြီး၊၇ိုဟင်ဂျာဟုမိမိကိုယ်မိမိသတ်မှတ်နေသူများကိုမြန်မာပြည်အတွက်အနစ်နာခံသူများဟုခေါ်ဆိုသင်.ပါသလား။ဒီလင်.မှာသတင်းသမားတွေတွေ.နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံေ၇းအင်အားစုတွေဆန္ဒပြ၇င်ဘယ်တော.မှမမြင်မိပါ။၇ိုဟင်ဂျာတိုင်း၇င်းသားဆိုနေသူများကိုနိုင်ငံေ၇းအင်အားစုတွေနမူနာယူသင်.ပါတယ်။http://www.youtube.com/watch?v=5jvIBalrmJI&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedဒါကတော.၇ခိုင်နဲ.တိုင်း၇င်းသားတွေ၇ဲ.၇ိုဟင်ဂျာဆိုတာကိုသတင်း၇ှင်းလင်းပွဲနဲ.သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ပါ။ဘယ်နိုင်ငံေ၇းစာစောင်၊သတင်းဌါနမှာမှဖေါ်ပြတာမတွေ.၇ပါ။ဒေါက်တာလွှဏ်ဆွှေပြောသလိုဘဲစိတ်ဝင်စားစ၇ာမကောင်းလို.ဖြစ်ပါလိမ်.မယ်။ PART 1 http://www.youtube.com/watch?v=z6dIC5QfQlg&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedPART2http://www.youtube.com/watch?v=lij1llTRzyE&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedPART3http://www.youtube.com/watch?v=-ew_UIjp4j0&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedPART4http://www.youtube.com/watch?v=O3G0NGbL2C0&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedPART5http://www.youtube.com/watch?v=4C_HCTG1E-Y&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedPART6http://www.youtube.com/watch?v=5wYEvtIUmXE&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedPART7http://www.youtube.com/watch?v=Rdgd2uaE4fA&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embeddedဒါကတော.၇ိုဟင်ဂျာအမည်ခံတွေ၇ဲ.ကောက်ကျစ်ကြံစည်ပုံကိုအတိုချူံးေ၇းသားထားတဲ.ဇော်မျိုးဘလော.ဆီကလင်.လုပ်ထားပေးတာ၊၇ှည်၇ှည်ဝေးဝေးနဲ.၇ှင်း၇ှင်းလင်းလင်းသိချင်၇င် ဒေါက်တာအေးချမ်း( ဂျပန်) ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည်နိုင်ပါတယ်။http://myanmartruthers.blogspot.com/2009/02/ms-word-zawgyi-comment-copypaste-casb.htmlအမျိုးသားေ၇းသစ္စာဖြင်.ချစ်အိကိုနေမျိုးအီးမေးပို.မည်.မေးလ်ကိုကော်ပီပို.တာဖြစ်တယ်။
-ဟန်တင်ဟန်ရဲ့ clash of civilization ကို လေ့လာကြည့်ရင် သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေ ပါနေတာ တွေ့ရတယ်...ခုတလော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ...
ကမ္ဘာသည် အပြင်တွင်လုံး၍ ကိုရန်ထဲတွင် ပြားပါသည်
ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက ဖတ်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းလေးတစ်ကွက်ကိုသွားသတိရမိတယ်။ မြေးအဖိုး၂ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ မြေးလုပ်သူက သူငယ်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသွားတ...
မူဆလင်ဘာသာဝင်ခေါ်တောကုလားတို့သည်ဗမာ၊ကရင်၊ရခိုင်၊မွန်၊ကချင်၊ကယားစသော မြန်မာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ဝါးမျိုရန်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ...
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်ပါ။ uk ဖြစ်ပါတယ်
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ စိတ်ထား နဲ့ ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲ?
ခွေးတွေလည်း လေးဘက်ထောက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရပါ
အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်
Always problems with muslims
Muhammad bowed to moon gods!
Crazy arab people panic over snake
Crazy Arabs II
Kuwaiti Girl in Police Dress
Behind niqab (veiled women)
100% halal ass
The basics of seduction according to islamic shari...
Muslim Baby Girl Performing for Money
Arabic Taboo dance
Arabic Exotic Dance
Malayah ass dance
Malaya Festival !.. New Booty Shaking Clip
Michaels Jackson မွတ်ဆလင်ပြောင်းသွားရုံမက တရားပင်ေ...